Ryanair dia nanitatra ny sidina nofoanana hatramin'ny martsa 2018 | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | General, About us
Andro vitsivitsy lasa izay dia nampita tamin'alahelo izahay fa ny Seranam-piaramanidina Ryanair Nanafoana sidina be dia be voalahatra hatramin'ny 28 Oktobra. Androany dia fantatsika fa i Ryanair dia manitatra ireo sidina nofoanana tsy latsaky ny hatramin'ny martsa 2018. Inona no dikan'ity? Hanao ahoana ny hafa Mpandeha 400.000 no voakasik'izany indrindra nanomboka tamin'ny volana novambra, nanampy ny fanafoanana sahady ho an'ny septambra sy oktobra.
Nampahafantarin'izy ireo tamin'ny fampahalalam-baovao malalaka fa azonao vakiana izany eto Toy izany koa ny amin'ny famintinan'izy ireo ny antony fanafoanana ireo voalaza sy ireo seranam-piaramanidina izay tena hiharan'izany fanafoanana izany.
Androany, manana fiaramanidina 400 i Ryanair, izay 25 tsy hiasa intsony mandra-pahatongan'ny daty voalaza. Mihevitra izany fa mandritra ny ririnina ho avy, hanafoana ny làlambe 34, roa amin'izy ireo miaraka amin'ny seranam-piaramanidina Espaniola tafiditra ao. Tsy miantra fotsiny amin'ireo mpandeha nividy an'ireto tapakila sidina ireto intsony izany fa koa ny orinasa Irlandey lafo vidy, satria nampidina be ny vinavinan'ny fitomboany.
Ho an'ny fahavaratry ny 2018 dia mikasa ny hanana fiaramanidina miisa 445 i Ryanair ary efa nampitandrina izy ireo fa 10 amin'izy ireo no hijanona tsy an'asa noho ny olana iray izay mampikaikaika azy ireo anio: ny korontana amin'ny fialan-tsasan'ireo mpanamory.
Fa andao mankany amin'ny zava-dehibe indrindra: sidina inona na zotra Espaniola no tafiditra ao anatin'ireny fanafoanana ireny? Raha ny filazan'ny kaompaniam-pitaterana dia izy ireo Glasgow-Las Palmas sy Sofia-Castellón. Ryanair koa dia nanome toky fa ny mpandeha toy izany dia efa nampandrenesina tamin'ny alàlan'ny mailaka "manolotra sidina hafa na famerenana amin'ny laoniny" ny tapakilan'izy ireo. Ary izy rehetra dia nahazo tambiny tamin'ny tapakila 40 euro (80 raha ny sidina an-dalambe) hahafahan'izy ireo manidina miaraka amin'ny orinasa eo anelanelan'ny volana oktobra sy martsa. Ireo mpandeha misafidy ity safidy farany ity dia tsy maintsy mamandrika ny tapakila amin'ny volana Oktobra.
1 Làlan'ny sidina nesorina
2 Fanontaniana novalian'i Ryanair
Làlan'ny sidina nesorina
Na ho an'ireo mpamaky Espaniola izay manaraka anay na ho an'ireo izay manaraka anay ivelan'ny faritry ny fari-taninay, dia eto avokoa ireo lalana nesorina nanomboka ny volana novambra ka hatramin'ny martsa 2018:
Tesalonika - Warsaw (WMI)
Fanontaniana novalian'i Ryanair
Manaraka izany, avelanay ianao amin'ny sasany amin'ireo fanontaniana napetraka matetika tany amin'i Ryanair tato anatin'ny herinandro vitsivitsy niaraka tamin'ny fanafoanana:
Hiverina amin'ny 2018 ve ity olana fampifanarahana A / L ity?
Tsy satria ny A / L dia hotendrena mandritra ny 12 volana feno amin'ny 2018.
Efa nampandrenesina ve ireo mpanjifa voakasik'izany rehetra izany amin'ny fanovana amin'ny ririnina?
Eny, ny mpanjifa voakasik'izany rehetra izany dia nahazo fampandrenesana mailaka androany.
Ireo mpanjifa fanovana fotoana ve dia manan-jo hahazo onitra EU261?
Tsia, satria ireo fanovana fandaharam-potoana ireo dia natao 5 herinandro ka hatramin'ny 5 volana mialoha, dia tsy nipoitra ny tambin-karama EU261.
Hiakatra ve ny vidiny vokatr'ity fitomboana miadana ity?
Ryanair dia hanohy hampihena ny tahan'ny. Andiana varotra seza no hisosa mandritra ny volana ho avy manomboka amin'ny fivarotana seza 1 tapitrisa amin'ity faran'ny herinandro ity amin'ny taha 9,99 €.
Hisy fanafoanana bebe kokoa ve?
Ity fitomboana miadana ity dia midika fa hanana fiaramanidina sy mpanamory fiaramanidina sisa tavela isika mandritra ny ririnina ary amin'ny fahavaratry ny taona 2018. Tamin'ny herinandro lasa dia niasa sidina mihoatra ny 16.000 izahay tamin'ny fanafoanana 3 fotsiny, ny 1 noho ny fanidiana ny làlambe ary ny 2 noho ny olana ratsy fanodinana.
Ahoana no ahafantarako raha nisy fiantraikany tamin'ny sidina nataoko?
Handray mailaka fanovana sidina avy any Ryanair ianao na amin'ny Alatsinainy 18 septambra na anio Alarobia 27 septambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ryanair dia nanitatra ny sidina nofoanana hatramin'ny martsa 2018